Habkii loo fuliyey iyo Ninkii Fuliyey qaraxyadii Hotel Central + Qabiilkiisa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Habkii loo fuliyey iyo Ninkii Fuliyey qaraxyadii Hotel Central + Qabiilkiisa
Qaraxyaddii mataanaha ahaa ee shalay lagu qaaday Hotel Central laguna qaarijiyey ildhibaano Gudoomiye ku xigeenkii Maamulka Gobolka Banaadir ayaa la sheegay inuu fuliyey nin hoteelka degenaa mudo ku dhow 6 bilood.
Ninkaan oo aanan helin weli magaciisa iyo documents-ka uu hotelka ku degenaa ayaa la sheegayaa inuu qaraabo la ahaa milkiilayaasha hotelka reer Jirde Xuseen.
Dhagarqabahaan qorsheeyey qaraxyadii maanta ayaa la sheegayaa inuu baxsaday kadib markii uu baabuurka kusoo habeeyey waxyaabaha qarxa soona dhigay Parking-ka hoteelka, baabuurkaa oo ku qarxay gudaha hoteelka.
Dhagarqabahaan oo aad u isticmaalayey lacago fara badan ayaa wadan jiray istaafka hotelka marka uu aadayo meelo kamid ah magaaladda. Istaafka raaca marka uu aado xaafado ka mid ah magaalada ayuu siin jiray lacag 100$, taasoo keentay in ilaaladda hotelka ku tartamaan shaqsiga u raaci lahaa xaafadaha uu aado. Xaafadaha uu aado marka uu galayo ayuu inta badan waardiyaha banaanka ku reebi jiray, halka uu gudaha isagu la geli jiray baabuurka.
Dhagarqabahaan baray ilaaladda hotel central lacagaha fara badan ayaan marnaba la baari jirin baabuurkiisa marka uu kasoo laabto xaafadaha kala duwan ee uu soo booqdo. Dhagarqabahaan ayaa qolka uu ka degenaa hotel Central xiran jiray mararka qaar ee uu ka baxo magaalada Muqdisho.
Safarkiisii ugu danbeeyey ee uu dhowaan kasoo laabtay wuxuu ku tagay Magaalada Hargeysa ee Maamulka Somaliland, halkaas oo dhowr jeer oo horeyna uu u tagay, lana sheegay inuu deegaan ahaan kasoo jeedo. Waxa uu u dhashay beesha Isaaq.
Qofka isku qarxiyey Masaajidka iridiisa ayaa la sheegayaa inuu qaraxyada iskula soo xir xiray qolkii u xirnaa dhagarqabahaan. Sidoo kale mid kamid ah ilaalada hotel-ka central ayaa la sheegayaa inuu rasaas ku dhamaystirayay masuuliyiinta Dawladda kuwaas oo ay toogteen ciidamada Dawladda Soomaaliya oo gurmad usoo fidiyey Central hotel. Rasaasta mudada ka dhex dhaceysay gudaha hotelka ayaa la sheegayaa inay ahayd mid kamid ah ilaalada hoteelka oo dhamaystirayey dadka ku dhaawacmay labada qarax.
Dhagarqabihii soo abaabulay qaraxyadaan mataanaha ah ayaan la ogeyn meel uu ku sugan yahay. Nabadsugida Soomaaliya ayaa ku fashilantay hawshii umadda Soomaaliya ka sugeysay.